OpenAI: Artificial Intelligence Projects အားလုံးအတွက်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည် Linux မှ
OpenAI: Artificial Intelligence Projects အားလုံးအတွက်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးအားလုံးဖွင့်နိုင်သည်
«OpenAI» လက်ရှိတွင်ဖွံ့ဖြိုးသောပုဂ္ဂလိကအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း Artificial Intelligence စီမံကိန်းများ အားလုံးအတွက်. လူ ၁၀၀ ခန့်ရှိသောပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီငယ်တစ်ခု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာယင်းကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သည် «Inteligencia Artificial (IA)» လူသားအားလုံးအကျိုးအတွက်။ ထိုနေ့၌အခြေခံသည် ဆန်ဖရန်စစ္စကို, California, USA.
«OpenAI» ယင်း၏အောင်ခြင်းအားဖြင့်ဤအကျိုးကျေးဇူးရရှိရန်မျှော်လင့်ပါသည် Artificial Intelligence စီမံကိန်းများ အဖြစ်လူသိများ «AGI»အင်္ဂလိပ်စကားစုမှ «Artificial General Intelligence», ဖြစ်လာသည် အနာဂတ်မြင့်မားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစနစ်များစီးပွားရေးအရတန်ဖိုးအရှိဆုံးအလုပ်တွင်လူသားများကိုကျော်ဖြတ်နိုင်သည့်လူသားထုကိုရရှိနိုင်သည့်လူသားအချိန်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအသုံးချနိုင်ခြင်း။
«OpenAI»တိုက်ရိုက်တည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားပါ လုံခြုံစိတ်ချရသော AGI လူတိုင်းအတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းအခြားသူများကသူတို့နှင့်အတူအခြားသူများကိုကူညီနိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၏အမှု၌မျှော်လင့်ပါတယ် «I+D» ဒီရလဒ်အောင်မြင်ရန်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမဟာသူမနဲ့အတူတကွအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်တယ် microsoft, ၏ကုသိုလ်ဖြစ်အခြေခံအုတ်မြစ် ရိဒ်ဟော့ဖ်မန်းနှင့် Khosla Venturesအခြားသူများများထဲတွင်။
ဒါကြောင့်ရှင်းပါတယ် «OpenAI» ကဲ့သို့သောအခြားကုမ္ပဏီများနှင့်ကွဲပြားနေသည် Apple, Microsoft သို့မဟုတ် Google အားလုံးအထက်မှဘဏ္financialာရေးနှင့်စီးပွားရေးအကျိုးအတွက်ရှာကြာလော့l. ပြီးတော့သူရရှိထားတဲ့အရာအားလုံးဟာဘဝကိုစပြီးစတင်ကတည်းကအချိန်တိုအတွင်းမှာပဲလုပ်ခဲ့ပါတယ် အောက်တိုဘာ ၂၀၁၅၊ ရသောအခါ Elon Musk နှင့်ဆမ် Altman အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အတူအဖွဲ့အစည်း၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုကြေငြာခဲ့သည်ထက်ပိုပြီးကတိပေးခဲ့သည် ဒေါ်လာဘီလီယံ အတူတူရန်
1 အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း OpenAI စီမံကိန်းများကို
1.1 OpenAI အားကစားရုံ
အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း OpenAI စီမံကိန်းများကို
မှစ.«OpenAI» တည်ထောင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်သောအတွက်အများအပြားစီမံကိန်းများတီထွင်ခဲ့သည်«IA» အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။
OpenAI အားကစားရုံဖြေ - Open Source Interface ကလေ့လာမှုကိုအားဖြည့်ပေးတယ် «IA» ပိုပြီးအလိုလိုသိပါစေ။
ခိုးမှု: စက်ရုပ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှုစနစ်ကိုအသုံးပြုသည် «IA».
ရေး: ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများတွင်စာသားအလိုအလျောက်ပြီးစီးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အွန်လိုင်း AI ကိရိယာ။
«OpenAI Gym» ဒါဟာအစုတခုဖြစ်ပါတယ် tools တွေ ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဘို့စီစဉ်ပေးခဲ့သည် အားဖြည့်သင်ယူမှု algorithms ။ ဤပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်စာကြည့်တိုက်သည်စံသတ်မှတ်ထားသောပတ် ၀ န်းကျင်များသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်နှင့်လွယ်ကူစွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့်အားဖြည့်သင်ကြားရေးလုပ်ငန်းများကိုဆက်တိုက်ပြုလုပ်သည်။
၏စီမံကိန်း «RoboSumo» သူတို့ကိုတိုးမြှင့်ကူညီရန်အေးဂျင့်များ (သင်ယူမှုစွမ်းရည်နှင့်အတူ virtualized humanoid စက်ရုပ်) များအကြားယှဉ်ပြိုင်မှုကိုအားပေးတယ် စွမ်းဆောင်ရည်, ထောက်လှမ်းရေးနှင့်သင်ယူမှုပင်ယှဉ်ပြိုင်မှု၏အခြေအနေတွင်အပြင်ဘက်။
La «IA» ၏နောက်ကျော၌ «Writeup» ကြီးမားတဲ့နှင့်အထင်ကြီးပြသထားတယ် ဘက်စုံGame of Thrones သို့မဟုတ် Harry Potter ကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများကိုဆက်လက်လေ့လာနိုင်ရန်အတွက်သိပ္ပံနည်းကျဆောင်းပါး၏ခေါင်းစဉ်ကိုလိုက်နာပြီး၊ အသုံးပြုသူနှင့်အတူပြင်ပအကြောင်းအရာများဥပမာအားဖြင့်သီချင်းများကိုရေးစပ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများ၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့်မပါဘဲမည်သည့်စာသားနှင့်မဆိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေများစာရင်းကိုပေးနိုင်သည်။
ဒီနှစ်မှာတော့သူတို့ကaalgorithm ကို ကိုခေါ် GPT-2, ၎င်းသည်၎င်းအားဖြစ်နိုင်ချေအလွဲသုံးစားမှုကြောင့်မထုတ်ပစ်ရန်ကတိပေးခဲ့သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ဘာသာစကားပေါ်ရှိဂန္ထဝင်လုပ်ဆောင်မှုမှသည်အဆင့်မြင့်သောဘာသာစကားပြန်ဆိုခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များအထိ၊ ဆောင်းပါးများ၊ သတင်းများနှင့်ဝါကျတစ်ခုတည်းအပေါ်အခြေခံသည့်စာသားအပြည့်အစုံကိုပင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်စီမံကိန်း၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်ဟုသံသယရှိသည် «Writeup» ထိုနည်းပညာအချို့ကိုတည်ဆောက်ထားသည်။
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတန်ဖိုးထားနိုင်ခဲ့တယ်၊ «OpenAI» ဒါကမကြာသေးမီကပေမယ့်အနာဂတ်ဖြစ်ပါတယ် သုတေသနကုမ္ပဏီ «Inteligencia Artificial»ကျန်းမာရေးနှင့်မျှတသောတိုးတက်မှုဖြင့်အားလုံးအတွက်အားလုံးအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကမ္ဘာကြီးကိုလိုလားသောအကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည် «Inteligencia Artificial». ထိုကဲ့သို့သောနည်းဖြင့်ဘဏ္benefitsာရေးအကျိုးအမြတ်များထုတ်ပေးရန်လိုအပ်မှု၏ကန့်သတ်ချက်များသည်၎င်းတို့၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲကာလတွင်အဟန့်အတားတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ သို့မှသာ၎င်းတို့သည်ဘဏ္orာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။
ထို့အပြင်သူတို့သည်၏အသုံးပြုမှုနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မြှင့်တင်ရန်«Inteligencia Artificial» တစ်ဦးအဖြစ် တစ် ဦး ချင်းစီလူ့အလိုတော်၏ extension ကို, ထိုတိုးပွားစေပါသည် လူ့လွတ်လပ်ခွင့်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်နိုင်သမျှကျယ်ပြန့်စွာနှင့်တူညီစွာကမ္ဘာတဝှမ်းလုံး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » OpenAI: Artificial Intelligence Projects အားလုံးအတွက်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးအားလုံးဖွင့်နိုင်သည်
Parrot OS 4.7: ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ hacking အတွက် distro ဗားရှင်းအသစ်
Linux Foundation သည် Edge Computing သည် Cloud Computing ထက်သာလွန်မည်ဟုယုံကြည်သည်